19 | June | 2009 | Save Burma
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ – တိုကျို၊ ဂျပန်
ဂျပန်ရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတို့က တိုကျိုတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း၊ ငှက်များ-ငါးများ လွှတ်ခြင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေး ထောက်ခံအားပေးသူများအား ဖိတ်ကြားခြင်း၊ မြန်မာ နအဖ အစိုးရအား တောင်းဆိုတိုက်တွန်းခြင်း စသည်တို့ကို သင့်လျော်သည့်အချိန်၊ သင့်လျော်သည့် နေရာများတွင် တခမ်းတနား ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ အချိန်မရ၍ အားလုံးကို ဖော်ပြပေးနိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ယင်းသို့ တက်တက်ကြွကြွ လှုပ်ရှားကြသည်တို့ထဲမှ တခုဖြစ်သည့် JAC ၏ လှုပ်ရှားမှုကိုသာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Download all – here
Tagged with ဒေါ်စုမွေးနေ့
World focus on Burma (19 June 2009)
Jasmine planted in honour of pro-democracy leader
Press and Journal – Alanna Petrie –
Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize in 1991 for her attempts to make Burmaademocratic country. Her efforts followed the resignation of …
Beatle news briefs: Macca will have opening act at Citi Field
It is vital that Aung San Suu Kyi is released so that she can govern the people who elected her and give Burma back the freedom we all take for granted. …
Suu Kyi celebrates 64th birthday in jail
World leaders demand the release and an end to the trial of Myanmar’s…
pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, as she celebrates her 64th birthday in prison.
A Burma birthday – in prison
San Francisco Chronicle – ‎
While Iran’s leaders nervously monitor street protests, Burma’s military rulers are trying to ride out their own crisis. A worldwide protest continues to …
EU calls for release of Suu Kyi
Haber 27 – ‎
“We urge Myanmar to embark onagenuine transition to democracy bringing peace and prosperity to its people,” it said. The EU says the message will be …
Wall Street Journal – Ian Holliday – ‎
The initial reaction to this latest twist in the long-running Burma saga was outrage. Close to Insein Prison, brave huddles of largely silent witnesses …
Council calls for release of Burma’s Suu Kyi
Irish Times – Patrick Smyth – ‎
FOREIGN POLICY: THE EUROPEAN Council yesterday called “for the immediate unconditional release of [Burmese opposition leader] Aung San Suu Kyi, …
US Senate women urge Suu Kyi freedom
WASHINGTON (AFP) — The 17 women serving in the US Senate madeajoint appeal Friday for the release of Myanmar’s opposition leader Aung San Suu Kyi as she …
Wall Street Journal – ‎
In the 1800s, British soldiers conquered what used to be known as Burma. It became the world’s biggest rice exporter andamajor source of timber. …
EU agrees to step up Myanmar sanctions – Brown
… opposition leader Aung San Suu Kyi. ‘Europe agreed today to step up sanctions and take further targeted measures against the Burmese regime,’ British …
Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi turns sixty-four today. She remains under house arrest. Activists across the world are marking her birthday …
Of protests and players: Iran, Burma and the US
… not to say that Burma’s rural population should be estimated to support the military government or oppose any potential candidacy of Aung San Suu Kyi, …
A Burmese woman in Malaysia shedsatear as she listens to song dedicated to detained opposition leader Aung San Suu Kyi, who is marking her 64th birthday. …
Ball gets around
Financial Times – Emiko Terazono –
Nobel prize winner Aung San Suu Kyi , who turned 64 yesterday, isapatron of the charity, and Anthony Aris , twin brother of her late husband Michael, …
Others go so far as to propose that the West should acceptadiminished role for Aung San Suu Kyi, Myanmar’s leading opposition figure. …
Why These Protests, And Not Others?
American Conservative Magazine – Daniel Larison – ‎
Would the West have been half as animated about the crackdown in BurmaAung San Suu Kyi’s picture had not been so widely distributed and … two years ago if
Seenews: news report of 19.06.2009
Girodivite – ‎
… 2009, 16:46 CET | Story | B92 Campaigners across the globe are honoring the birthday Friday of Burma’s detained democracy leader Aung San Suu Kyi. …
Commentary – Joshua Muravchik – ‎
This softening may have emboldened that junta to place opposition leader Aung San Suu Kyi on trial in May after having been content to keep her under house …
EU condemns violence in Iran
European Voice – Andrew Gardner – ‎
In another, they declared their solidarity with the Burmese opposition leader Aung San Suu Kyi, whose 64th birthday is today, her 2209th day under house …
Refugees in limbo while they wait for US entry
Online Athens – Tricia Spaulding – ‎
In 2006, the United States started accepting applications from Burmese/Myanmar refugees who wanted to immigrate here, Htoo said. He and his entire extended …
Uthuru Wasanthaya-agateway to development, recovery, revival …
Lankaweb – ‎
MYANMAR ( Burma) has about 503000 idps due to decades ofalong Internal conflict in Myanmar as well as Cyclone Nargis. · The Central African Republic has …
Inside Yangon, Myanmar
Villagers in front of their home inavillage on the outskirts of Rangoon, Burma, May 31, 2009. She reports that her income has been halved in the past year …
Christian Science Monitor – ‎
… report’s worst-performing category, six were from Africa (the seventh was Malaysia, where traffickers are exploiting migrants from Burma, or Myanmar). …
Pajamas Media – ‎‎
Iran would have looked like Burma/Myanmar or North Korea, and all we would have known about events there surrounding the election would have come from …
EU summit results in financial reforms and progress on Lisbon Treaty
Deutsche Welle – Susan Houlton – ‎
… for European Commission President Jose Manuel Barroso to run for another five-year term and an agreement for increased sanctions against Burma (Myanmar).
The official sponsor of the Yadanabon FC, Alpine Mineral water Company, said they had brought fans all the way from Mandalay in central Burma in 10 cars and …
World Refugee Day: European Commission funding provides for the …
For nearly twenty five years, thousands have fled from fighting in Burma/Myanmar crossing the border into Thailand. The refugees are not allowed to leave …
THAILAND: More ethnic Karen flee to Thailand
IRINnews.org – ‎
MAE SOT, 19 June 2009 (IRIN) – Thousands of ethnic Karen villagers have fled across the border into Thailand in recent weeks in the wake of Myanmar army …
Medical News Today (press release) – ‎
The Rohingya,aMuslim ethnic minority originating from Myanmar, are denied citizenship and suffer persecution and discrimination in Myanmar. …
June 19, 2009 (DVB)–The Burmese army is increasingly susceptible to ambushes from the Karen National Union following the overthrow ofanumber of Karen …
Tagged with Aung San Suu Kyi, Burma, IDPs, Junta's army, Karen refugee, Myanmar
VOA Burmese : မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေ ဘန်ကီမွန်းနဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်
မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း (Mr. Ban Ki-moon) ရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မပြေလည်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို အကျိုးရလဒ်တွေ ထွက်ပေါ်နိုင်မယ့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ တရားစွဲဆိုခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အပါအ၀င် သက်ဆိုင်သူ အားလုံးနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ဆုံမှ ဖြစ်မယ်လို့လည်း ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံသွားမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်လာတာနဲ့အမျှ ဒီခရီးစဉ်ကနေ မြန်မာနိုင်ငံက နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေအတွက် တစုံတရာ အထောက်အကူ ဖြစ်လာလေမလား မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အသိုင်းအ၀န်းက မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက အဓိက အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေကတော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ကမ္ဘာ့အကြီးအကဲတယောက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာမယ်ဆိုတာဟာ ကြိုဆိုစရာ၊ မျှော်လင့်စရာလို့ ဆိုပါတယ်။
“အရင့်အရင်ကလာခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ Special Envoy တွေ လာတဲ့အခါမှာတော့ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ပြန်ဖြစ်သွားတာတော့ မတွေ့ရဘူးပေါ့။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုး ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ အခုနေအခါ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အင်မတန်သိမ်မွေ့ပြီး အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ကာလကို ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းဆုံလမ်းခွကို ရောက်နေသလို ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတကာကလာပြီးတော့ ထိထိရောက်ရောက် ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး အပါအ၀င် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြေလည်ဖို့ ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့အနေနဲ့တော့ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကြိုဆိုမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီလိုပဲ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင်ကလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ်က မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တိုးတက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေနိုင်ပေမယ့်လို့ ပြဿနာတွေ ပြေလည်စေဖို့က ကုလသမဂ္ဂ တခုတည်းကို အားကိုးလို့ မရနိုင်ဘူးလို့လည်း ယူဆထားတာပါ။
“ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင် လာတာကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာပြည်ရဲ့ အကျပ်အတည်း ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို ထဲထဲဝင်ဝင် အတိုင်းအတာ တစုံတခုအထိ သိသွားနိုင်တယ်၊ ဒီက တွေ့သင့်တွေ့ထိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ပြီးတော့ ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လည်း ရှေ့ကို ဆက်လုပ်နိုင်မယ့် အတိုင်းအတာတွေကို စဉ်းစားသုံးသပ်လို့ ရလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘန်ကီမွန်း လာရုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကုလသမဂ္ဂက ၀င်ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ရုံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဖြေရှင်းမှုတခု ရမယ်လို့တော့ အန်ကယ့်အနေနဲ့ မယုံသလို မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးသမား တော်တော်များများကလည်း ဒီလိုတော့ ယုံကြည်မှု မရှိပါဘူး။”
ဒီလို မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာ ဒီခရီးစဉ်ကနေ မယ်မယ်ရရ အကျိုးရလဒ် ထွက်ပေါ်မလာမှာကိုလည်း အတွင်းရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင်က စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်တာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုပြီး သံတမန်အသိုင်းအ၀န်းကို ကိုးကားပြီး သတင်းတွေက ဖော်ပြနေကြပါတယ်။ အန်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့ သဘောထားကတော့…
တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးအေးသာအောင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကို အတွင်းရေးမှူးချုပ်လာမယ့် ခရီးစဉ်ဟာ အနှစ်သာရရှိတဲ့ ခရီးစဉ်တခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀န်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေနဲ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့မှဖြစ်မယ်လို့ ယူဆကြောင်း ပြောပါတယ်။
“အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဖို့ကတော့ အမြင့်ဆုံး အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ရမယ်၊ ပြီးတော့ အန်န်အယ်လ်ဒီ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တွေ့ရမယ်၊ တခြား ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေရယ်၊ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကို တွေ့သင့်တယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ မြင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့လည်း တွေ့သင့်တယ်၊ အကျဉ်းကျနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထဲက ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့လည်း တွေ့သင့်တယ်၊ ပြီးတော့ အရင့်အရင်တုန်းက ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်တွေ နောက်ပိုင်းလာတဲ့အခါမှာ တိုင်းရင်းသား ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီတွေနဲ့ တွေ့တာဆုံတာတွေ မရှိခဲ့ဘူး။ ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင် လာတဲ့အခါတော့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အချိန်ပေးပြီးတော့ တွေ့ဆုံသင့်တယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ သုံးသပ်ပါတယ်။”
Tagged with ဘန်ကီမွန်း, ဦးခင်မောင်ဆွေ, ဦးအေးသာအောင်